na ku saabsan - Qingdao Evergrowing Cage Co., Ltd
Evergrowing waa qeybiyaha ah ee hormuudka ka ah sabayn baqashada kalluunka for beeraha kalluunka ee gudaha iyo biyaha badda. Waxaan naga go'an tahay in la qorsheeyo oo la siiyo baqashada kalluun tayo sare leh aqoon saday in ay baahida iyo xaaladaha ee degaankaaga.
Xadidda keentay in daaqa weyn ee kaydka kalluunka duurjoogta ah. beeraha qafis Fish jira sidii xal waara deegaanka si ay dhibaatadan. Evergrowing ayaa ka shaqeeya horumarinta, soo saaridda iyo iibinta noocyada kala duwan ee sabayn baqashada kalluunka. The baqashada ayaanu bixinaa loo qaabayn doonaa in aad baahi u gaar ah. Our kala duwan oo ka mid ah ku haboon yar unugyada for shaqada cilmi ama wax soo saarka shiil ilaa baqashada Rafaa kalluunka HDPE wareeg ah oo awood u leh ka shaqeeya xaaladaha Oceanic.
Shirkadda ayaa gaadhin oo sii on koritaanka joogto ah baqashada kalluunka qeybinayay.
Ballaariyo joogitaanka suuqa iyo furid kartiyo kale oo suuqa adduunka oo dhan.
Inta lagu guda jiro sano ee horumarinta, waxaan u dhisay xiriirka iskaashi dhow la Shiinaha Ocean University, Institute Kalluumaysiga iyo saynisyahano khibrad naaxinta dunida oo dhan. Waxaan nahay qeybiyaha ee xal iyo adeegyada si ay u wanaajiyo faa'iidada.
Evergrowing waa lammaane fiican aad horumarinta mashruuca beeraha qafis kalluunka.
Hami iyo muddada-dheer, debecsan oo dhamaystiran
Si ay u bixiyaan qalabka ugu wanaagsan si loo badbaadiyo kharashka iyo in la wanaajiyo soo saarka
Foster ganacsiga deegaanka oo dabiici ah masuul ka